Iindaba -Zisebenza njani iizomisi zezandla, kunjalo?
Nokuba usebenza eofisini, wenze umthambo kwiziko lokuzonwabisa okanye utye kwindawo yokutyela, ukuhlamba izandla kunye nokomisa ngesandla zizinto zemihla ngemihla.
Nangona kulula ukungahoyi indlela ezomisa izandla zisebenza ngayo, iinyani zinokukumangalisa-kwaye ngokuqinisekileyo ziya kukwenza ucinge kabini ngexesha elizayo xa usebenzisa enye.
Isomisi sesandla: isebenza njani
Ngokufana netekhnoloji esetyenziswe kumnyango ozenzekelayo, iisenzi zokuhamba ziyinxalenye ebalulekileyo yendlela ezomisa ngayo izandla. Kwaye-nangona zizenzekelayo-izivamvo zisebenza ngendlela ephucukileyo.
Ukukhupha imitha engabonakaliyo yokukhanya kwe-infrared, isivamisi kwisomisi sesandla sibangelwa xa into (kule meko, izandla zakho) isiya kwindlela yayo, ibuyisa isibane sibuyele kwi-sensor.
Isekethe yesomisi yesandla iza ebomini
Xa inzwa ibona ukukhanya kubuyela umva, ikhawuleza ithumele isiginali yombane ngesekethe yesomisi yesandla kumatshini wokomisa ngesandla, uyixelele ukuba iqalise kwaye ikhuphe umbane kunikezelo lwee-mains.
Ke iphelile kumatshini wokomisa ngesandla
Indlela izomisi ezisebenza ngayo ukususa ukufuma okungaphezulu kuya kuxhomekeka kwimodeli yokomisa oyisebenzisayo, kodwa zonke izinto ezomileyo zinezinto ezimbini ezifanayo: imoto eyomileyo yesandla kunye nefeni.
Ezindala, iimodeli zesiko ezisebenzisa isomisi sombane ukunika amandla ifeni, ethi ke emva koko ivuthe umoya kwinto yokufudumeza nangomphunga obanzi-oku kuphume amanzi ezandleni. Nangona kunjalo, ngenxa yokusebenzisa kwayo amandla aphezulu, obu buchwephesha buba yinto yexesha elidlulileyo.
Zisebenza njani izomisi zezandla namhlanje? Ewe, iinjineli ziye zavelisa iintlobo ezintsha zokomisa ezinje ngeblade kunye neemodeli ezinesantya esiphezulu ezinyanzela umoya ngemilomo emxinwa kakhulu, zixhomekeke kuxinzelelo lomoya olukhupha amanzi kulusu lomhlaba.
Ezi modeli zisasebenzisa imoto eyomisa ngesandla kunye nefeni, kodwa ngenxa yokuba kungekho mandla afunekayo ukubonelela ubushushu, indlela yale mihla ikhawuleza kakhulu kwaye yenza isomisi sesandla singabizi kakhulu ukuqhuba.
Zomisa njani izandla iincukuthu
Ukukhupha umoya ngaphandle, isomisi sokuqala kufuneka sitsale umoya kumoya ojikeleze indawo. Ngenxa yokuba umoya wokuhlamba uqulethe iibhaktheriya kunye neengqungquthela ezincinci ze-fecal, abanye abantu baye bafika kwizigqibo malunga nokukhuselwa kwezandla-kodwa inyaniso kukuba, i-dryers ibhetele ukutshabalalisa iintsholongwane kunokuba zisasaze.
Kule mihla, kuqhelekile ukuba izomisi zezandla zakhiwe ngobuchule obuphezulu bokucoca umoya (HEPA) ngaphakathi kubo. Esi siqwenga sobukrelekrele senza ukuba isomisi sandla singene ngaphakathi kwaye sibambe ngaphezulu kwe-99% yeebhaktiriya ezihamba ngomoya kunye nezinye izinto ezingcolisayo, oko kuthetha ukuba umoya ogelezela ezandleni zabasebenzisi uhlala ucocekile ngendlela emangalisayo.
Ixesha Post: Oct-15-2019